Raw Fasoracetam Powder (110958-19-5) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5)
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2018
Fasoracetam အမှုန့်သည် ADHD ကုသမှုအနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအသစ်နှင့်အလားအလာရှိသော racetam nootropic ဖြစ်သည်။ …… ..
စွမ်းဆောင်ရည်: 1570kg / လ
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် racetams အဖြစ်လူသိများ nootropics ၏ subclass အတွင်းကျရောက်မယ့်အစွမ်းထက်သစ်ကို nootropic ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ piracetam ၏အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏သိမြင်သက်ရောက်မှု piracetam ထက်အများကြီးအစွမ်းရှိ၏။ ဒါဟာအစ piracetam ထက်ပို Anti-amnesiac ဖြစ်ပြီး, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်တစ်က high-ဆှဖှေဲ့ choline လွှာမှ Enhancer နှင့်ဦးနှောက် cortex အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်
အမှတ်တံဆိပ် NAmE ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့်
CAS အရေအတွက် 110958-19-5
InChIKey GOWRRBABHQUJMX-MRVPVSSYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C10H16N2O2
မော်လီကျူး Wရှစ် 196.248
Monoisotopic Mass 196.121 g / mol
ချက်ပြုတ်ing Point 456.8 mmHg မှာကို C ° 760
Solubility ရေ၌၎င်း၏နိုင်မှု 50 စင်တီဂရိတ်မှာ 25mg / ml ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် Application တိုးတက်သိမှုထုတ်ယူခြင်းနှင့် Memory
ကုန်ကြမ်း Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5) ဖျေါပွခကျြ
Fasoracetam Powder nootropics ၏ racetam မိသားစုထဲမှာတစ်ဦး nootropic ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ Racetams အဆိုပါ 1960s ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများ၏ကြီးမားသောအုပ်စု, မိဘဝင်း Piracetam မှပြုပြင်ရှိသမျှတို့, ပတ်ဝိုင်း
ဒါဟာ fasoracetam အပေါ်လူ့လေ့လာမှုများကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်ကလေးဘဝ ADHD တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံပြုမူဆက်ဆံစေခြင်းငှါညွှန်း, ကန့်သတ်ပေမယ့်အပြုသဘောဆောင်များမှာလက်ရှိအလားအလာ Non-လှုံ့ဆော် ADHD treatment. အဖြစ်တီထွင်လျက်ရှိသည်လူသိအောင်-ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများထံမှတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားလည်း, မှတ်ဉာဏ်တိုးမွှငျ့အိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာသက်သာရာနှင့်အခြား drugs. ကနေဆုတ်ခွာ၏ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေမည်အကြောင်းအကြံပြု
ဘယ်လို Fasoracetam မ အမှုန့် (110958-19-5) အလုပ်လုပ်?
သို့သော်ထိုသို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အချိုမှု၏လွှတ်ပေးရန်, ဂါဘမြို့သားများနှင့် acetylcholine modulate ယုံကြည်မှုန့်သိမှတ်ခံစားမှုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို fasoracetam အဖြစ်မျှအပြီးသတ်သောသက်သေအထောက်အထား, ဦးနှောက်ရဲ့အရေးအပါဆုံး neurotransmitters သုံးခုရှိပါသည်။
တက်-စည်းမျဉ်းအကျိုးကျေးဇူးများမှာဆှေးနှေးအဆိုပါဂါဘမြို့သား (ခ) လက္ခဏာများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အရေးယူမှုနောက်ထပ်ယန္တရားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအပြည့်အဝမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆွနှင့် ပတ်သက်. မည်ကဲ့သို့ fasoracetam အကျင့်ကိုကျင့်နားလည်ရန်လိုအပ်
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5)
မှတ်ဉာဏ်နှင့် General သိမှတ်ခံစားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါစေ
အလားအလာ ADHD ကုသမှု
အကြံပြုထားသည် Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5) သောက်သုံးသော
သေးလူသားတွေကို fasoracetam မရှိစံချိန်စံညွှန်းမီထိုးရှိပါသည်။ 10 အဆိုပါ 15 အတွက်ပိုကြီးတဲ့ဆေးများနှင့်အတူ MG - - အဆိုပါသို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားသေးငယ်ဆေးများ 30 န်းကျင်အထိအကြံပြု 50 နေ့နှုန်းကိုသုံးကြိမ််ထမ်းဆောင်နှုန်း MG
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Fasoracetam အမှုန့် (110958-19-5)
ကျန်းမာတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်တာဝန်သိယူသည့်အခါ Fasoracetam အမှုန့်လုံခြုံခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းမွန်စွာဒဏ်ခံဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အပျော့စားနှင့်ကူးပြောင်းရေးကာလပင်ပန်း, အစာခြေအီနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်း: အဆိုပါအများဆုံးမကြာခဏဖော်ပြခဲ့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ racetam မိသားစုထဲမှာကတခြား nootropics ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။
သို့သော်အချို့အသုံးပြုသူများက fasoracetam အမှုန့်ကိုသောက်သည့်အခါလိင်စိတ်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်များလျော့နည်းသွားခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်
အဲဒီမှာ fasoracetam နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားတိကျသော interaction ကပေါ်ရရှိနိုင်သတင်းအချက်အလက်မျှဖြစ်ပါသည်, သို့သော် phenibut. potentiate စေခြင်းငှါ
Meclofenoxate (Centrophenoxine) (၅၁-၆၈-၃)